Sergio Ramos Guuldaro Kalama Kulmin Camp Nou inta uu yahay Kabtanka Real Madrid – Gool FM
Sergio Ramos Guuldaro Kalama Kulmin Camp Nou inta uu yahay Kabtanka Real Madrid
CR Shariif May 5, 2018
( Spain ) 05 Maajo 2018. Kulanka El Clasico ayaa u xiiso badneen sida kulamadii hore u dhexmaray Barcelona iyo Real Madrid, laakiin arinta muhiimkaa Los Blancos ayaa dooneysa in ay jabiso rikoorka guuldaro la’aan Barca ee kal ciyaareedkan iyo gaar ahaan Sergio Ramos oo aan wax guuldaraa la kumin kulamada Camp Nou inta uu yahay kabtanka kooxda Madrid.
Waxa uu yahay halyeeyga hogaamiyaha kooxda seddaxdii sano ee lasoo dhaafay inta uu xiraya yahay calaamada kabtanka kuma uusan guuldareysan garoonka Barcelona.
Safarkii ugu horeyay ee garoonka Barcelona isagoo ah kabtanka Real Madrid waxa ay aheyd 2015/16 xagaagas, markaana Los Blancos ayaa ku adkaatay 2-1.iyadoo Ramos laga saaray cayaarta wuxuuna ahaa mid ka maqan garoonka goolkii guusha kooxdiisa ay dhalisay.
Kal ciyaareedkii xigay Ramos wuxuu ciyaaray 90 daqiiqo waxa ayna u aheyd kulan muhiin ah markii uu xili dambe kooxdiisa u barbareeyay goolkii lagu hogaaminayay waxeyna cayaarta kusoo idlaatay 1-1,.
Kulanka seddaxaad uu Ramos guuldaro ku dhadhamin Camp Nou wuxuu ahaa lugtii kowaad finalka Supercopa de Espana bishii August ee sanadkii hore waxa ayna kooxdiisa ku adkaatay 3-1 iyagoona koobka hantay ugu dambeyn.
Didier Drogba Biyo uu Cabay oo Sabab u Noqday Gool iyo Guul ay Gaartay kooxdiisa+SAWIRRO
Riyad Mahrez oo niyad jabinaya Man City si uu ugu biiro kooxdaan